ရင်ကို ထိမှန်စေခဲ့သော မြားချက်များ – ခင်မမမျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ရင်ကို ထိမှန်စေခဲ့သော မြားချက်များ – ခင်မမမျိုး
ရင်ကို ထိမှန်စေခဲ့သော မြားချက်များ – ခင်မမမျိုး
Posted by kai on Mar 17, 2013 in Politics, Issues, Think Tank | 19 comments
ဖေ့ဘွတ်၊ ဘလော့၊ တွစ်တာ စတဲ့ social media တွေရဲ့ လူအများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ ပညာရှင်အချို့က သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာမှာ မှတ်ချက် (comment) တွေကြောင့် စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်တာတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တာတွေက အစပြုလို့ နောက်ဆုံး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်လိုက်တဲ့ အထိ ဖြစ်သွားတာတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီသုတေသန စာတမ်းကို ဖတ်ရတော့ ဒီလောက်တောင်ပဲ ဆိုးဝါးသလားလို့ သံသယ၀င်ခဲ့မိပါတယ်။ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာ အသာထားလို့၊ ပြင်ပကမ္ဘာမှာတင် လောကဓံတရားမျိုးစုံရဲ့ ဒဏ်ကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးပြီမို့၊ social media က မှတ်ချက်လေးတွေက ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကို တစုံတရာ ထိခိုက်စေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတလော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ လုံးဝမဆိုင်တဲ့၊ ကျွန်မ ရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ လာတင်ထားတာလဲ မဟုတ်ပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖတ်မိသွားတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေကတော့ ကျွန်မရဲ့ ရင်ကို မြားချက်တွေလို ထိမှန်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှတ်ချက်လေးတွေကြောင့် မေးခွန်းတွေလဲ အများကြီး ပေါ်ခဲ့သလို၊ တွေးစရာတွေလဲ အများအပြား ရှိသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီမှတ်ချက်လေးတွေရဲ့ မူလအစကတော့ လက်ပန်းတောင်းတောင်၊ ကြေးနီစီမံကိန်းမှာ ဆန္ဒပြကြတဲ့ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေကို အွန်လိုင်းကနေ ပေးထားကြတဲ့ မှတ်ချက်တချို့ပါ။ ကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားခံတွေ၊ ဓားစာခံတွေ၊ သားကောင်တွေ၊ ဓားခုတ်ရာ လက်ဝင်လျှိုမိသူတွေ အများအပြား မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်မှုတွေကို ဒီစာစုလေးထဲမှာ ရေးသားတင်ပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အတွေးစလေးတွေကိုသာ ရေးသားတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) သွဲ့သွဲ့ဝင်းက ဥပဒေစကား ပြောရအောင် ဘယ်တက္ကသိုလ်က ဆင်းလာတာလဲ။ အောက်စဖိုဒ့်၊ ကင်းဘရစ် တက္ကသိုလ်က ဆင်းလာတာမို့လား။
ဒီမှတ်ချက်ကို ဖတ်လိုက်မိချိန်မှာ ကိုယ့်မျက်စိကိုတောင် ကိုယ်မယုံနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ စာသွားစာလာအရ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ တယောက်က ရေးထားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဥပဒေစကားဆိုတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်မှ ပြောရတဲ့ စကားလို့ သူ့ကို ဘယ်တက္ကသိုလ်ကများ သင်ပေးလိုက်ပါလိမ့်လို့ သံသယဖြစ်မိပါတယ်။ လူတယောက်မှာ မွေးဖွားလာကတည်းက မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ မွေးဖွားရှင်သန်လာတဲ့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အစိုးရက ဥပဒေများပြဌာန်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းထွက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားမှန်ရင် ဘယ်သူမဆို ဥပဒေစကား ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ ဥပဒေကို နားလည်အောင် လေ့လာရပါတယ်။ နားမလည်သူရှိရင်လဲ အခြားနိုင်ငံသားများက ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးပါတယ်။ လူသားမဟုတ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုတောင် ဥပဒေအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့ ခေတ်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်မှပဲ ဥပဒေစကားပြောခွင့် ရှိရမယ် တဲ့လားရှင်။ မှတ်ချက်ပေးသူက အောက်စဖို့ဒ်၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်တွေကို အတော်လဲ အထင်ကြီးပုံရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှတ်ချက်အကြောင်းကို အောက်စဖို့ဒ်၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က ဥပဒေပါမောက္ခတွေများ သိသွားရင်တော့၊ ဂုဏ်ယူဖို့နေနေသာသာ၊ ဘုရားသခင်လို့ ထရေရွတ်ကြမှာ မလွဲမသွေပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အောက်စဖို့ဒ်၊ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များက ကျောင်းသားတွေကို ပညာတွေ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေကိုတင် ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားအချင်းချင်း တန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိပဲ တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံမှုတွေ၊ စာနာနားလည်မှုတွေကိုပါ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှင်သန်လာစေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ဖန်တီးပေးထားကြတာပါ။ ဥပဒေအဝေးသင်ဘွဲ့အတွက် ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က ဥပဒေရက်တို သင်တန်းတွေကို ကျွန်မ သွားတက်နေခဲ့တာ သုံးနှစ်ရှိပါပြီ။ ဥပဒေပညာကို လေ့လာဆည်းပူးဖြစ်ခဲ့တာလဲ လေးနှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ။ ဘယ်သင်ရိုးမှာမှ၊ ဘယ်သင်တန်းပို့ချမှုမှာမှ၊ ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမှ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်ကသာ ဥပဒေစကားပြောရမယ်၊ အခြေခံလူတန်းစားက ဥပဒေစကားပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ မပြဌာန်းထားပါဘူး။
(၂) အောက်တန်းစား လယ်သမားတွေ။
ဒီမှတ်ချက်တွေ အများအပြား ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ရေးသားသူတွေက မြန်မာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ လူဦးရေရဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက လယ်သမားတွေကို ကိုယ်စားပြုနေပါသလဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ၀င်ငွေကို ဘယ်သူတွေက ရှာပေးနေတာပါတဲ့လဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တက္ကသိုလ်ဆိုတာတွေ၊ ကုမ္ပဏီဆိုတာတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံဆိုတာတွေ မရှိခင်တုန်းက မြန်မာတွေ ဘာလုပ်ပြီး စားဝတ်နေရေးဖူလုံအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသလဲ။ ခုလိုမှတ်ချက်ချသူတွေရဲ့ ဆွေခုနစ်ဆက်၊ မျိုးခုနစ်ဆက်မှာ လယ်သမားလုံးဝ မရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတာကို သေချာအာမခံနိုင်ပါသတဲ့လား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာကော စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ရေးကို ဘယ်သူတွေက လုပ်ဆောင်နေကြတာပါလဲ။ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ၊ ဂုဏ်ပကာသနတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရတနာတွေ၊ ရာထူးတွေကမှ အထက်တန်း ကျတယ်လို့ ယူဆပြီး၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် အထက်တန်းစားလို့ သတ်မှတ်နေသူတွေဟာ အဲဒီ အောက်တန်းစား လယ်သမားဆိုသူတွေ ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို မစားပဲ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ၊ ဂုဏ်တွေ၊ ငွေစက္ကူတွေကို ၀ါးစားပြီး အသက်ရှင်သန် နိုင်ကြပါ့မလားလို့ တွေးတောမိပါတယ်။
(၃) စာမတတ်၊ ပေမတတ်တွေ။
လူတွေရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေတွေက မတူညီကြပါဘူး။ တချို့က မွေးကတည်းက ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင်းဆေးခွင့်ရကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက ဘ၀အတွက်၊ ထမင်းတနပ်အတွက်၊ ပေါင်မုန့်တဖဲ့အတွက် ရုန်းကန်နေကြရပြီး၊ ပညာသင်ကြားခွင့် မရကြတဲ့ ကလေးတွေ အများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါကလဲ ဘ၀ပေးအခြေအနေ တခုတည်းနဲ့တင် မဆိုင်ပါဘူး။ မွေးဖွားကြီးပြင်းရတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်က နိုင်ငံတော်အစိုးရများရဲ့ တာဝန်ယူမှု အရည်အသွေးတွေနဲ့လဲ ဆိုင်ပါသေးတယ်။ အချို့သော နိုင်ငံတွေမှာ အခြေခံပညာရေးက အခမဲ့ဖြစ်ပေမယ့်၊ တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးတာကြောင့် မူလတန်း ကျောင်းတက်ဖို့ အရေးကိုတောင် တနေ့ဆယ်မိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီး ကျောင်းတက်ရတဲ့ ကလေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းစရိတ်ကလဲ မတတ်နိုင်၊ မိဘမှာလဲ ကူဖော်လောင်ဖက်မရှိလို့ မိသားစုတံပိုးကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မနိုင့်တနိုင် ၀င်ရောက်ထမ်းခဲ့ကြရသူတွေလဲ အများအပြားပါ။ ဒီလိုလူတွေရဲ့ ဘ၀ကို စာနာမှုနဲ့ ဖေးကူဖို့ မစဉ်းစားရင်တောင် သူတို့ရဲ့ ဘ၀ပေးအခြေအနေကို နှိမ့်ချပြောဆိုဖို့ မသင့်ပါဘူး။ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်တာဟာ လှံကိုင်ထားသူရဲ့ အရည်အချင်းကိုလဲ ဖော်ပြရာကျပါတယ်။ လောကမှာ စာတွေ၊ ပေတွေ ဆိုတာက ပညာရေးအခွင်အလမ်းရှိတယ်ဆိုရင် သင်ယူလို့ရပါတယ်။ စာတွေပေတွေ တတ်လို့လဲ အထင်ကြီးစရာ မလိုသလို၊ စာတွေပေတွေ မတတ်လို့လဲ အထင်သေးနှိမ့်ချဆက်ဆံဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ စာတွေပေတွေ ဆိုတာကလဲ လူသားတွေက အဆင့်ဆင့်တီထွင်ဆန်းသစ်လာကြပြီးမှ၊ အချင်းချင်းမျှဝေလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာတတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ စာတတ်ပေတတ်တွေက ပြန်လည်အကောင်အထည် ဖော်လာခဲ့ကြတာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု စာတတ်ပေတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတောင် ကမ္ဘာ့ပြည်သူ တရပ်လုံး စာတတ်မြောက်ရေး၊ မူလတန်းပညာ သင်ကြားတတ်မြောက်ရေး၊ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ရေးတွေကို အားတက်သရော လုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာ ဘ၀ပေးအခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံ အခြေအနေကြောင့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်း ခံစားခွင့်မရခဲ့ရှာသူတွေကို စာမတတ်၊ ပေမတတ် တွေလို့ နှိမ့်ချသတ်မှတ်တဲ့ မြန်မာ့စာတတ်ပေတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးများ ပေါ်ထွက်လာတာဟာ အံ့သြဖွယ် ကောင်းလိုက်ပါဘိ။
(၄) သူများမြှောက်ပေးတိုင်း အိုဗာအိုက်တင်တွေ လုပ်ပြနေကြတယ်။ မြေလေးသိမ်းခံရတာများ လျော်ကြေးပြန်တောင်းလိုက်ရင် ပြီးတာပဲကိုး။
ဒီလို မှတ်ချက်မျိုး ပေးသူတွေဆီမှာ အိမ်ခြံမြေတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများ ရှိပါသလားလို့ ကျွန်မ ရိုးသားစွာ သိချင်မိပါတယ်။ သူတို့ အိမ်ခြံမြေတွေကို အစမ်းသဘောနဲ့ ခဏသွားသိမ်းကြည့်ထားလိုက်ရင် ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုး ဖြစ်နေကြမလဲဆိုတာ မြင်ဖူးကြည့်ချင်လို့ပါ။ မြေဆိုတာကို အသာထားလို့ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို ခါးပိုက်နှိုက်သွားရင်တောင် ဘယ်လိုခံစားရပါသတဲ့လဲ။ ကုန်ကားတွေမှောက်၊ ပွဲရုံတွေ မီးလောင်လို့ နှလုံးရောဂါဖောက်ပြီး သေသွားတဲ့ သူဋ္ဌေးတွေ၊ စီးပွားပျက်သွားလို့ စိတ်ဓာတ်ကျဘ၀ပျက်သွားတဲ့ လူတွေ၊ သူခိုးဓားပြဒဏ်ကို ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်နေတဲ့လူတွေ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဒီလိုလူတွေတောင် ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ ခံစားကြရသေးရင်၊ ဓါးမဦးချ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ လယ်ယာမြေတွေလဲ မတရားအသိမ်းခံရ၊ စားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေလဲ ကြုံတွေ့ရ၊ အဆိပ်သင့်ရေတွေလဲ သောက်သုံးနေရတဲ့ လူတွေရဲ့ နှလုံးအိမ်ထဲကို ခဏလောက်ဝင်ပြီး ခံစားကြည့်ကြစမ်းပါ။ သူများမြှောက်ပေးလို့ မျက်ရည်ကျရအောင် ဒီလူတွေဟာ ဇာတ်ခုံပေါ်က ကျွမ်းကျင်သဘင်သည်တွေ မဟုတ်ဘူး။ နှလုံးအိမ်ထဲက ခံစားချက်ကြောင့် စီးဆင်းလာတဲ့ သူတို့ မျက်ရည်တွေက မျက်ရည်တုတွေ မဟုတ်ဘူး။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေလို ကျွန်မရဲ့ ရင်ကို မြားချက်တွေလို တိုက်ရိုက်မထိမှန်ပေမယ့် တစုံတရာ ထိရှစေခဲ့တဲ့ တခြားမှတ်ချက်တွေလဲ အများအပြားရှိပါသေးတယ်။ မှတ်ချက်တွေကို တွေ့စမှာ ကျွန်မ အံ့သြသွားမိတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထိခိုက်မိတယ်။ နောက်တော့မှပဲ မျက်ရည်တွေ အလိုအလျောက် ကျနေခဲ့တာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သတိထားလိုက်မိတယ်။ ကျွန်မဟာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့ မိန်းမတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ပမှာနေတုန်းမှာ မှတ်မှတ်ရရဆိုလို့ ဒီပဲယင်း လူသတ်ပွဲနဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလတွေတုန်းကပဲ မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးတာပါ။ ၀မ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာလဲ တခါကတော့ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက ကျွန်မ သိပ် တန်ဖိုးထားခဲ့ ဖူးသူတယောက်၊ လှောင်အိမ်ထဲက လွတ်မြောက်လာစဉ်ကပါ။ ဒါပေမယ့်ရှင်၊ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မတောင် သတိမထားမိလောက်အောင် လက်သီးကို တင်းတင်းဆုပ်ရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့မိတာကတော့ ဒီတကြိမ် ပထမဦးဆုံးပဲ ထင်ပါရဲ့။ အရှိန်ပြင်းတဲ့ မြားချက်တွေက ကျွန်မရဲ့ ရင်ထဲကို စူးဝင်သွားခဲ့တယ်။
ခင်မမမျိုး (၁၆၊ ၃၊ ၂၀၁၃)
ဟေ့လူ့ချမ်းသာ မလိုင်ဒေ ခင်ဗျားဒို့ကျပ်ကျပ်သဒိထားဂျ
ခေတ်သစ် ကွန်မြူနစ်ဒေဂိုမွေးထုတ်ပေးဒါနဲ့ အတော်တူဒယ် နားလည်ဂျသလား
ကွန်မြူနစ်ထဲ မှာလဲ အခွင့်ထူးခံ လူကြီးကွန်မြူနစ် ဆိုတာ ခွဲထားပြီးသား အဘစော ရဲ့။
တကယ်စဉ်းစားစရာပါ….ပြောသူကလဲဒေါ်စုကိုချစ်(ကြည်ညို) တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာထင်ပါတယ်…. ပညာမတတ်တဲ့သူတွေတွက်ပညာလိုမယ်ဆို ပညာရှင်တွေတွက် အကျင့်သီလ ( စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိူင်ရာ) လိုမယ်ထင်တာပဲ… (တွေးမိတာပါ)
လူသားဆန်တဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ရေးပြထားတာ ကောင်းလိုက်တာ။
စကားကို လက်လွတ်စပယ် ပြောတတ်တဲ့အလေ့အကျင့်ကို ပြုပြင်ဖို့ ဆင်ခြင်ဖို့ ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ အရေးတကြီးသတိပေးလိုက်တာဖြစ်လို့…
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်တွေထဲက အကြိုက်ဆုံးဂုဏ်တော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ သုဂတော ဂုဏ်တော်ကို သတိရမိလိုက်တယ်။ :hee:
သေချာတာတော့ ဒီလို စကားတွေကို ဒို့ဂဇက်ရွာသူားတွေ မပြောခဲ့ကြပါဘူး။
လူတစ်ချို့ရဲ့ ချစ်လုံးလုံးမုန်းလျားလျား ဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် ဒီလို စကားတွေ ထွက်လာတာပါ။
ဒေါ်စုရဲ့ စေတနာကို လျစ်လျူရှုနိုင်ကြလေခြင်းလို့ မချင့်မရဲပြောမိကြတာတွေလည်းပါမှာပေါ့။
လှိုင်းကြမ်းများ ရိုက်ချက် တို့လက်နှစ်ဖက်ကိုခွဲခွာ
ခရီးကြမ်း တစ်ဝက်တစ်ပျက် နှစ်ဦးနစ်နာမယ့် အရေးမှာ
ဟုတ်တာပေါ့ ကိုခိုင်ရယ် ကိုယ့်ကိုပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့ ရင်ကိုထိမှာနေတဲ့မျှားချက်တွေပါ…။ ဒီလို တွေဖြစ်နေတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး ….။ ပညာရည်နည်းပါးလို့ ဒီလိုစကားသံတွေ ထွက်လာတာနဲ့တူပါရဲ့ ….။
ဒေါ်စု ကို အရင်တုန်းက ကြည့်မရခဲ့တဲ့ ၊ လေးစားဖို့ ဆိုတာ အိပ်မက်မမက်ဖူးခဲ့တဲ့
စစ်ကိုင်းတိုင်းရဲမှူးကြီးတောင် ၊ ဒေါ်စု ပင်ပန်းခံတာတွေကို တွေ့ ရပြီးနောက်
ဒေါ်စု သာ တစ်ခုခုဖြစ်ကြည့်
အထက်က အမိန့် မပေးထားပေမယ့်လဲ
အဲလောက် မအစမ်းပါနဲ့ ကပေရယ်…
” ဒေါ်စု သာ တစ်ခုခုဖြစ်ကြည့် ၊
အကုန်ပစ်သတ်မယ် ” လို့ ကြိမ်းခဲ့တယ်ဗျာ ။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဲမှူးကြီး ကတော့ ၊
ဘာသဘောနှင့် ကြိမ်းတာလဲတော့ မသိဘူး ။
အဘ ရဲ့ သဘောထားကလည်း ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဲမှူးကြီး ရဲ့
ပြောစကား နှင့် သိပ် မကွာလှပါဘူး ။
ပြီးမှ လူသတ်မှု အတွက် ၊ အပြစ်ရှိရင်လည်း စက်တိုင်တက်ကြတာပေါ့ ။
အဲ့သည်သပိတ်တွေကို နှိမ်နင်းဘို့ တာဝန်ကျသူထဲမှာသူလည်းပါပုံရမယ်
( ဒိလိုပြောလို့ အစီရင်ခံစာကို ကန့်ကွက်တာဟုတ်ဘူးနော )
အခြေနေကို အခြေခံပြီး မေမေဂျီးဂိုပြဿနာဖန်တီးနေတဲ့
အုပ်စုက ရှိနေတယ်ဆိုတာ အကောင်ပေါ်လာဘီ
ကိုယ့်လယ်အသိမ်းမခံရဘဲ ဆန့်ကျင်တဲ့ စာတတ်ပေတတ်အုပ်စုကတစ်စု
ကိုယ့်လယ်အသိမ်းမခံရဘဲ ထောက်ခံတဲ့စာတတ်ပေတတ်အုပ်စုက တစ်စု
စာနာတရား နဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အတွေးတွေ အတွက် လေးစားပါတယ် ဆရာမရှင့်။
ဒီလို အကြောင်းအရာ လေးကို ချရေးပြပေးတာ အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာတရား ဆိုတာ လူတိုင်းရင်ထဲ အမှန်ရှိလာချိန်မှာ တော့ ကျွန်မတို့ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းကောင်း ပါရဲ့။
ဒီစကားအသုံးအနှုံးတွေက မပြောသင့်တဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့ လက်မခံထိုက်တဲ့အသုံးအနှုံးတွေပါ..။
လူတွေ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါ ဆဲတဲ့အခါ မျိုးမှာ
မပြောသင့်တဲ့ လက်မခံထိုက်တဲ့ စကားအသုံးအနှုံးတွေ အသုံးပြုလေ့ ရှိကြတယ်ပေါ့…။
ဒေါသဆိုတာ ဆင်ခြင်တုံတရားကို ဖုံးလွှမ်းတတ်တယ်…။
မှန်တယ်ထင်တာပြောရပေမဲ့ ဘယ်လိုပြောရမလည်း ဘယ်လိုပြောသင့်သလည်း ငါပြောလိုက်ရင် တဘက်သားဘယ်လိုခံစားသွားရမလည်း အစရှိသည် (ဆင်ခြင်တုံတရား လေးနဲ့ ပြောကြဆိုကြ သင့်ပြီး ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ကိုယ်ရေးတဲ့စာ
တောင်းပန် ထောက်ခံပွဲတောင် လုပ်ကြအုံးမယ် ဆိုလား..။
လုပ်ပေါ့ ..ရှင်ဒို့က ရဲဒွေဘဲ…
တစ်နေ့ဒုံးဂတောင် ငပိဖောင်းတဲ့ ကိုဆာမိလည်းတောင်းဘန်လိုက်သေးဒယ်
ရဘါဒယ်ကွာ ဒို့ဂ သာကီဒေဘဲ သံသရာမှာဆွေမျိုးဒေတော်ဂျဒါဘဲဂလါး
“စကားကျွံရင် နှုတ်မရ” ဆိုတာရှိတယ်လေ
By James Mint
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်တွေ စပီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သုံးလာရချိန်မှာ လူအများစု စိတ်ဝင်တစား အသုံးပြုလာတာ ဖေ့ဘွတ်ပါပဲ……. ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရေး နည်းစနစ် ကောင်းမွန်တာကြောင့် လူတွေ အသုံးများလာကြရင်း သတင်းတွေ ပြန့်နှံ့စီးဆင်းလာကြရင်းကနေ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီး မီဒီယာတွေ လူတွေအပေါ်မှာ မလှိမ့်တပါတ် လုပ်ခဲ့တာတွေ ပေါ်လာပြီး အရှက်တကွဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်…… ဒီအချိန်မှာ ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ အသုံးဝင်မှု၊ သတင်းစီးဆင်းမှုကို ကိုယ်လိုသလို လမ်းကြောင်းယူဖို့ အရှိုရှို ဖေ့ဘွတ်ထဲကို ၀င်လာကြပါတယ်……. တစ်ချိန်က ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ရေငုတ်အကောင့်တွေဟာလည်း အရှိုရှို ၀င်လာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး လူအများစုကို လိုက်အက်ထားလေ့ ရှိပါတယ်….. အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ယူပြီး လူတွေကြားမှာ သူတို့ပစ်သွင်းချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် ပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပီလို့ ယူဆလာချိန်မှာ သူတို့အက်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အကောင့်တွေကို Tag လုပ်ပီး လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပစ်သွင်းပါတော့တယ်…… အဲ့ဒိအကောင့်တွေရဲ့ အဓိက လှုပ်ရှားလေ့ရှိတာဟာ ဆူဆူပူပူ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၊ တစ်နေရာရာမှာ ဆန္ဒပြမှု ကြီးမားလာမယ့် ပုံသဏ္ဍန်ရှိတာနဲ့ စတင် တာထွက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်……. ထုံးစံအတိုင်း လူများစု အကြိုက် အစိုးရကို ပုတ်ခတ်ရင်း၊ ဆန္ဒပြပွဲ အရှိန်မြင့်အောင် မီးလောင်ရာ လေပင့်ရင်း မီးစာကို တင်လေ့ရှိကြပါတယ်…… အခြေအနေ မကောင်းရင် ပြန်လည် ငုတ်ရှိုးသွားကြသလို၊ သူတို့လိုချင်သလို အခြေအနေ မဟုတ်ပဲ ထွက်လာတဲ့ အဖြေဟာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားရင် အများအတိုင်း ဖော်လိုလိုက်ရင်း ပြန်လည် ငုတ်ရှိုးသလို၊ ထွက်လာတဲ့ အဖြေကနေ နောက်ထပ် ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေမျိုးကို ဦးတည်မယ်လို့ အရိပ်အယောင် မြင်လာရင် အများအတိုင်း ဖော်လိုလိုက်ရင်းကနေ လိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းဘက်ကို Diversion လုပ်သွားလေ့ ရှိကြပါတယ်…… ဥပမာအားဖြင့် အခုလက်ရှိ ဒေါ်စုလုပ်ရပ် မှန်တယ်၊ ဒေါ်စု အစီရင်ခံစာဟာ ပြီးပြည့်စုံပါတယ် စသည်ဖြင့် အများအကြိုက်ဖော်လို လိုက်ရင်း၊ ဒေါ်စုဘက်က နာသလိုလိုနဲ့ မသိမသာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ဇောင်းပေး မောင်းသွင်းနေတဲ့ လူတွေဟာ လက်ပံတောင်းမှာ ဆန္ဒပြမှု အရှိန်ပြင်းလာခဲ့စဉ်က ဘာတွေ ပြောခဲ့၊ ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိထားမိသူတွေ သိမှီကြပါလိမ့်မယ်…… တချိန်က ဟန်ဝင်းအောင် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာမှသည် ဆန္ဒပြခဲ့တာမှန်သမျှ အားလုံးကို ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ထိုလူတွေဟာ အခုတော့ ၁၈၀ ဒီဂရီကို လှည့်သွားပြန်ပါပီ……. သူတို့နဲ့အတူ ဆန္ဒပြပွဲကို မထောက်ခံရင်၊ တရုတ်ကို မဆန့်ကျင်ရင်ပဲ အစိုးရဘက်တော်သားလို့ကို ဖော်ထုတ် စွတ်စွဲခဲ့ကြတဲ့ လူတွေပါပဲ…. ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ထောက်ခံရေးခဲ့သလို ဒေါ်စုစကားတွေကိုတောင် ထီမထင်သလိုလို ရေးလာတာတွေ သိမှီခဲ့ကြသူတွေ မှတ်မိကြမှာပါ……. အခုတော့လည်း တစ်ချိန်က ပြောခဲ့တာ သူတို့မဟုတ်သလို အရေးအသားကို အထင်အရှားတွေ့လာရပါတယ်…. ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာက ပြည်တွင်းက စတ္တုတ္ထမဏ္ဍိုင်ထဲမှာ သတင်းကို သတင်းပီပီသသ ရေးနိုင်မယ့် မီဒီယာတွေ မတွေ့ရတာပါပဲ….. တစ်ခါတစ်လေမှာ မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင် ဆိုက်ဝါးအတွက် အဓိက ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်တွေရဲ့ မောင်းနှင်မှုကို ခံနေရတာ မြင်ရတာလည်း သံဝေဂ ရမိတယ်…… တစ်ချို့ ဆိုက်ဝါးအကောင့်တွေဟာ လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အချက်အလက်တွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ တင်ပြပီး (သို့မဟုတ်) သတင်းကြိုတင်နိုင်ပီး သိပ်မကြာခင် သူတို့ တင်ပြချက်တွေကို နာမည်ကြီး မီဒီယာတစ်ခုမှာ ပါလာနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိနေတာလည်း သတိထားမိပါတယ်…… အွန်လိုင်းက လူအများစုရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ဟာ ဖြစ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပေါ်မှာ ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းတင်လွန်းကြတဲ့အတွက် အဲ့ဒါကို နင်းပီး အသုံးချသွားတာ များပါတယ်….. အခုလက်ရှိ အကောင်းဆုံး ဥပမာကတော့ ဒေါ်စုရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါင့်စေ့ ကောင်းမွန်ပြီး ဒေသခံတွေအတွက် ဦးစားပေးထားပေမယ့်လည်း ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းပို့ဖို့ မှိုင်းတိုက်ခံထားရလို့ မှိုင်းရည်ဝနေတဲ့ ဒေသခံတွေအဖို့ကတော့ ဖုတ်လေတဲ့ငပိ ရှိလေတယ်လို့တောင် မထင်တာကို ကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်…… အခုလက်ရှိ လက်ပံတောင်းကိစ္စမှာ ဒေါ်စုကို ဆန္ဒပြအောင် လုပ်နေကြခြင်းဟာ ကျားစကားနဲ့ ပြောရရင် ချောင်ပိတ်ထားရဲ့သားနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ ဒေါင့်စေ့တဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ကင်းဝင်သွားလို့ အတင်းကို ပိတ်ဆို့ဖို့ လုပ်လာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်… ဒါကို ပိုပီးသိုက်ဝန်းစေဖို့က ဆိုက်ဝါးတွေက သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားလိုလိုနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကောင်းကောင်း ဘေးတီးပေးနေကြခြင်းပါ….. အရင်ခေတ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဆိုက်ဝါးဟာ အတော့ကို အရေးပါလာပါတယ်…… လက်နက်တွေကိုင်တွယ် တိုက်ခိုက်နေဖို့ မလိုပဲ ကိုယ်လိုချင်သလို သတင်းအချက်အလက်တွေကို စီးမြောစေခြင်း၊ ဦးနှောက်တွေကို ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေချင်တာတွေကို ပုံဖော်ယူသွားကြတာ များပါတယ်…… အွန်လိုင်းပေါ်က ဆိုက်ဝါး၊ မြေပြင်က ဆိုက်ဝါး ဘယ်လိုပဲ ကွဲပြားပေမယ့် သဘောသဘာဝကတော့ အတူတူပါပဲ…… အဲဒိ ဆိုက်ဝါးတွေဟာ ထစ်ခနဲရှိ ကိစ္စရပ်တွေကို အစိုးရကို လွှဲချလေ့ရှိကြသလို၊ ဒေါ်စုအပါအ၀င် အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရရဲ့ လှည့်ကွက်၊ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဒီလိုပြဿနာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပီး အမြဲလိုလို ဆိုက်ဝါးလုပ်လေ့ ရှိပါတယ်…… အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ထစ်ခနဲရှိ အစိုးရကို လွှဲချနေခြင်းမှသည် ဒေါ်စုအပါအ၀င် အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရရဲ့ လှည့်သမျှ၊ လုပ်သမျှ ခံရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မသိမသာ ရိုက်သွင်းသွားစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ရလာဘ်ကတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အတိုက်အခံတွေအပေါ် မြင်နေတဲ့ လူတွေရဲ့အမြင် ပြောင်းလဲလာသလို၊ အားကိုးမှု၊ ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း နှဲ့ယူတိုက်စားနိုင်အောင် စွမ်းလှပါတယ်…. ဆိုက်ဝါးကို ပေါ့ပေါ့သေးသေး မှတ်ယူလို့ မရပါဘူး…. ဆိုက်ဝါးတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုတွေကြောင့် လက်ပံတောင်းမှာ ဒေါ်စုကို ဘယ်လောက် အန္တရယ်ပေးခဲ့သလဲ လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်တွေက သက်သေတွေပါပဲ…… အခုလက်ရှိ အွန်လိုင်းက ဆိုက်ဝါး၊ မြေပြင်က ဆိုက်ဝါးတွေဟာ ဆူပူမှု မဖြစ်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်နေရခြင်းရဲ့ အနန္တိမ ပန်းတိုင်ဟာ အလုံးစုံ ဆူပူမှုပါပဲ…. အလုံးစုံ ဆူပူမှု ဖြစ်ရင်၊ နောက်ဆုံးရလာဘ်ဟာ တိုင်းပြည်ချောက်ထဲမကျခင် လက်နှစ်လုံးအလိုဆိုပီး အာဏာသိမ်းစေလိုခြင်းအပြင် အခြားရှိပါသလား……. အဆိုပါ ဆိုက်ဝါးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့က ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဖို့၊ ချင့်ချိန်ယုံကြည်ဖို့ အတွက် စာများများ ဖတ်ကြပါ၊ ဘယ်လိုလူတွေဟာ ဘယ်လိုတွေ ပြောလေ့ရှိပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲတတ်ကြသလဲ ဆိုတာတွေကို လေ့လာပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်…….
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်တွေ စပီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သုံးလာရချိန်မှာ လူအများစု စိတ်ဝင်တစား အသုံးပြုလာတာ ဖေ့ဘွတ်ပါပဲ……. ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရေး နည်းစနစ် ကောင်းမွန်တာကြောင့် လူတွေ အသုံးများလာကြရင်း သတင်းတွေ ပြန့်နှံ့စီးဆင်းလာကြရင်းကနေ တစ်ချိန်က နာမည်ကြီး မီဒီယာတွေ လူတွေအပေါ်မှာ မလှိမ့်တပါတ် လုပ်ခဲ့တာတွေ ပေါ်လာပြီး အရှက်တကွဲတွေ ဖြစ်လာပါတယ်……
ဒီအချိန်မှာ ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ အသုံးဝင်မှု၊ သတင်းစီးဆင်းမှုကို ကိုယ်လိုသလို လမ်းကြောင်းယူဖို့ အရှိုရှို ဖေ့ဘွတ်ထဲကို ၀င်လာကြပါတယ်……. တစ်ချိန်က ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ရေငုတ်အကောင့်တွေဟာလည်း အရှိုရှို ၀င်လာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး လူအများစုကို လိုက်အက်ထားလေ့ ရှိပါတယ်….. အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ယူပြီး လူတွေကြားမှာ သူတို့ပစ်သွင်းချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် ပြန့်နှံ့သွားနိုင်ပီလို့ ယူဆလာချိန်မှာ သူတို့အက်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အကောင့်တွေကို Tag လုပ်ပီး လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပစ်သွင်းပါတော့တယ်……
အဲ့ဒိအကောင့်တွေရဲ့ အဓိက လှုပ်ရှားလေ့ရှိတာဟာ ဆူဆူပူပူ ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၊ တစ်နေရာရာမှာ ဆန္ဒပြမှု ကြီးမားလာမယ့် ပုံသဏ္ဍန်ရှိတာနဲ့ စတင် တာထွက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်……. ထုံးစံအတိုင်း လူများစု အကြိုက် အစိုးရကို ပုတ်ခတ်ရင်း၊ ဆန္ဒပြပွဲ အရှိန်မြင့်အောင် မီးလောင်ရာ လေပင့်ရင်း မီးစာကို တင်လေ့ရှိကြပါတယ်…… အခြေအနေ မကောင်းရင် ပြန်လည် ငုတ်ရှိုးသွားကြသလို၊ သူတို့လိုချင်သလို အခြေအနေ မဟုတ်ပဲ ထွက်လာတဲ့ အဖြေဟာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားရင် အများအတိုင်း ဖော်လိုလိုက်ရင်း ပြန်လည် ငုတ်ရှိုးသလို၊ ထွက်လာတဲ့ အဖြေကနေ နောက်ထပ် ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေမျိုးကို ဦးတည်မယ်လို့ အရိပ်အယောင် မြင်လာရင် အများအတိုင်း ဖော်လိုလိုက်ရင်းကနေ လိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းဘက်ကို Diversion လုပ်သွားလေ့ ရှိကြပါတယ်……
ဥပမာအားဖြင့် အခုလက်ရှိ ဒေါ်စုလုပ်ရပ် မှန်တယ်၊ ဒေါ်စု အစီရင်ခံစာဟာ ပြီးပြည့်စုံပါတယ် စသည်ဖြင့် အများအကြိုက်ဖော်လို လိုက်ရင်း၊ ဒေါ်စုဘက်က နာသလိုလိုနဲ့ မသိမသာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ဇောင်းပေး မောင်းသွင်းနေတဲ့ လူတွေဟာ လက်ပံတောင်းမှာ ဆန္ဒပြမှု အရှိန်ပြင်းလာခဲ့စဉ်က ဘာတွေ ပြောခဲ့၊ ဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိထားမိသူတွေ သိမှီကြပါလိမ့်မယ်…… တချိန်က ဟန်ဝင်းအောင် ဖယောင်းတိုင် ထွန်းတာမှသည် ဆန္ဒပြခဲ့တာမှန်သမျှ အားလုံးကို ထောက်ခံခဲ့တဲ့ ထိုလူတွေဟာ အခုတော့ ၁၈၀ ဒီဂရီကို လှည့်သွားပြန်ပါပီ…….
သူတို့နဲ့အတူ ဆန္ဒပြပွဲကို မထောက်ခံရင်၊ တရုတ်ကို မဆန့်ကျင်ရင်ပဲ အစိုးရဘက်တော်သားလို့ကို ဖော်ထုတ် စွတ်စွဲခဲ့ကြတဲ့ လူတွေပါပဲ…. ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ထောက်ခံရေးခဲ့သလို ဒေါ်စုစကားတွေကိုတောင် ထီမထင်သလိုလို ရေးလာတာတွေ သိမှီခဲ့ကြသူတွေ မှတ်မိကြမှာပါ……. အခုတော့လည်း တစ်ချိန်က ပြောခဲ့တာ သူတို့မဟုတ်သလို အရေးအသားကို အထင်အရှားတွေ့လာရပါတယ်….
၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာက ပြည်တွင်းက စတ္တုတ္ထမဏ္ဍိုင်ထဲမှာ သတင်းကို သတင်းပီပီသသ ရေးနိုင်မယ့် မီဒီယာတွေ မတွေ့ရတာပါပဲ….. တစ်ခါတစ်လေမှာ မီဒီယာတွေကိုယ်တိုင် ဆိုက်ဝါးအတွက် အဓိက ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်တွေရဲ့ မောင်းနှင်မှုကို ခံနေရတာ မြင်ရတာလည်း သံဝေဂ ရမိတယ်…… တစ်ချို့ ဆိုက်ဝါးအကောင့်တွေဟာ လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အချက်အလက်တွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ တင်ပြပီး (သို့မဟုတ်) သတင်းကြိုတင်နိုင်ပီး သိပ်မကြာခင် သူတို့ တင်ပြချက်တွေကို နာမည်ကြီး မီဒီယာတစ်ခုမှာ ပါလာနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိနေတာလည်း သတိထားမိပါတယ်……
အွန်လိုင်းက လူအများစုရဲ့ အဓိက အားနည်းချက်ဟာ ဖြစ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပေါ်မှာ ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းတင်လွန်းကြတဲ့အတွက် အဲ့ဒါကို နင်းပီး အသုံးချသွားတာ များပါတယ်….. အခုလက်ရှိ အကောင်းဆုံး ဥပမာကတော့ ဒေါ်စုရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါင့်စေ့ ကောင်းမွန်ပြီး ဒေသခံတွေအတွက် ဦးစားပေးထားပေမယ့်လည်း ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းပို့ဖို့ မှိုင်းတိုက်ခံထားရလို့ မှိုင်းရည်ဝနေတဲ့ ဒေသခံတွေအဖို့ကတော့ ဖုတ်လေတဲ့ငပိ ရှိလေတယ်လို့တောင် မထင်တာကို ကြည့်ရင် တွေ့နိုင်ပါတယ်…… အခုလက်ရှိ လက်ပံတောင်းကိစ္စမှာ ဒေါ်စုကို ဆန္ဒပြအောင် လုပ်နေကြခြင်းဟာ ကျားစကားနဲ့ ပြောရရင် ချောင်ပိတ်ထားရဲ့သားနဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ ဒေါင့်စေ့တဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ မထင်မှတ်ပဲ ကင်းဝင်သွားလို့ အတင်းကို ပိတ်ဆို့ဖို့ လုပ်လာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်…
ဒါကို ပိုပီးသိုက်ဝန်းစေဖို့က ဆိုက်ဝါးတွေက သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားလိုလိုနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကောင်းကောင်း ဘေးတီးပေးနေကြခြင်းပါ….. အရင်ခေတ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဆိုက်ဝါးဟာ အတော့ကို အရေးပါလာပါတယ်…… လက်နက်တွေကိုင်တွယ် တိုက်ခိုက်နေဖို့ မလိုပဲ ကိုယ်လိုချင်သလို သတင်းအချက်အလက်တွေကို စီးမြောစေခြင်း၊ ဦးနှောက်တွေကို ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်စေချင်တာတွေကို ပုံဖော်ယူသွားကြတာ များပါတယ်…… အွန်လိုင်းပေါ်က ဆိုက်ဝါး၊ မြေပြင်က ဆိုက်ဝါး ဘယ်လိုပဲ ကွဲပြားပေမယ့် သဘောသဘာဝကတော့ အတူတူပါပဲ……
အဲဒိ ဆိုက်ဝါးတွေဟာ ထစ်ခနဲရှိ ကိစ္စရပ်တွေကို အစိုးရကို လွှဲချလေ့ရှိကြသလို၊ ဒေါ်စုအပါအ၀င် အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရရဲ့ လှည့်ကွက်၊ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဒီလိုပြဿနာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပီး အမြဲလိုလို ဆိုက်ဝါးလုပ်လေ့ ရှိပါတယ်…… အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ထစ်ခနဲရှိ အစိုးရကို လွှဲချနေခြင်းမှသည် ဒေါ်စုအပါအ၀င် အတိုက်အခံတွေဟာ အစိုးရရဲ့ လှည့်သမျှ၊ လုပ်သမျှ ခံရတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မသိမသာ ရိုက်သွင်းသွားစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ရလာဘ်ကတော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အတိုက်အခံတွေအပေါ် မြင်နေတဲ့ လူတွေရဲ့အမြင် ပြောင်းလဲလာသလို၊ အားကိုးမှု၊ ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း နှဲ့ယူတိုက်စားနိုင်အောင် စွမ်းလှပါတယ်….
ဆိုက်ဝါးကို ပေါ့ပေါ့သေးသေး မှတ်ယူလို့ မရပါဘူး…. ဆိုက်ဝါးတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုတွေကြောင့် လက်ပံတောင်းမှာ ဒေါ်စုကို ဘယ်လောက် အန္တရယ်ပေးခဲ့သလဲ လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်တွေက သက်သေတွေပါပဲ…… အခုလက်ရှိ အွန်လိုင်းက ဆိုက်ဝါး၊ မြေပြင်က ဆိုက်ဝါးတွေဟာ ဆူပူမှု မဖြစ်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်နေရခြင်းရဲ့ အနန္တိမ ပန်းတိုင်ဟာ အလုံးစုံ ဆူပူမှုပါပဲ…. အလုံးစုံ ဆူပူမှု ဖြစ်ရင်၊ နောက်ဆုံးရလာဘ်ဟာ တိုင်းပြည်ချောက်ထဲမကျခင် လက်နှစ်လုံးအလိုဆိုပီး အာဏာသိမ်းစေလိုခြင်းအပြင် အခြားရှိပါသလား…….
အဆိုပါ ဆိုက်ဝါးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့က ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဖို့၊ ချင့်ချိန်ယုံကြည်ဖို့ အတွက် စာများများ ဖတ်ကြပါ၊ ဘယ်လိုလူတွေဟာ ဘယ်လိုတွေ ပြောလေ့ရှိပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲတတ်ကြသလဲ ဆိုတာတွေကို လေ့လာပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်…….